Seyi tine Shungu neChirongwa ichi?
Munguva ino yatiri kusangana nematambudziko mazhinji, vanhu panguva imwe chete vasangana nedambudziko rekunge vachigara vega uye vachibatanidzwa nevamwe. Ruzivo rwekuva vanhu , chinhu chikuru chekuziva ndechekushinga takatarisana neMatambudziko.
Kuburikidza kugadzirisa mafungiro, tine tariro yekuti chirongwa ichi tiri mushandirapamwe neimwe nzira chinokwanisa kutirapa seboka pasi rino rose.
Franco Prinsloo (Nyanduri)
Franco Prinsloo ndiNyanduri vane Mibayiro saNyanduri uye ndiKondakita we Mhanzi.Chinhu chaicho chaakanangana nacho imhanzi yeChoral,mumhanzi weVocal nemumhanzi yeMitambo.
Ben Outram (MusicPaint Yokuvaka)
Dr Benjamin Outram Akazvimirira semuFreelance ari Nyanvi muSainzi, Injiniya, Teknorogist, Nyanzvi uye Nyanduri weSainzi Achishanda kuEngland
Sonya Rademeyer Inyanzvi ye PIAD-alumni yeMifananidzo yeMeso.Mudzimai akazvitsaurira kubereka nekuongorora Tsitsi mukuterera zvakadzama
Anja Pollard (Chiremba weMumhanzi)
Anja Pollard NdiChiremba vakanyorwa veMumhanzi , Mumwe we American Music and Imagery Association achiita mumhanzi we Choral. Anodzidzisa achitarisa paDanho reTertiary uye ndiye Chiremba mukuru Nyanzvi yePretoria Cochlear Implant Unit –Team
Goitsemodimo Sekhu (Anovaka Dandemutande)
Goitse iNyanzvi yeIT akabereka Maitiro nekuvaka dandemutande. iNyanzvi ari Mutariri wemaitiro edandemutande uye Akazvimirira pakutanga Zvirongwa zvedandemutande.